I-Kolyvan Lake - i-blue gem ye-Altai Territory
I-Zmeinogorsk esifundeni sase-Altai ibilokhu idumile ngezici zayo eziyingqayizivele zemvelo kanye nensimu ethembisayo ekuthuthukiseni imboni yezokuvakasha. Indima ebalulekile kule ndawo idlalwa yiLolyvan Lake. Kubizwa ngokufanele ngokuthi isikhumbuzo esiyinkimbinkimbi semvelo.
I-Kolyvan Lake itholakala enyakatho yeColyvan Ridge, futhi amakhilomitha amathathu ukusuka kuyo yi-Savushki. Ingenye yezindawo ezinkulu zokuhlala endaweni eningizimu-ntshonalanga ye-Altai Territory. Ubude bayo cishe ngamakhilomitha amane, ububanzi - ngaphezu kokubili, nokujula kufinyelela kumamitha angu-28.
Ngokuvamile izivakashi zibiza ikholi yeColyvan Lake Savushkin. Leli gama livele ngenxa yedolobha eliseduze elisendaweni efanayo. Akukude neKolyvansky futhi yiLwandle oluMhlophe. Futhi le ndawo yonke ibizwa ngokuthi i-Mountain Kolyvan.
Indlela engcono kakhulu yokufika echibini ukuvakashela umuzi waseSasushki. Ukuphendukela empumalanga, nje ufike enkabeni yalo mzana, uzobona umgwaqo oholela echibini. Lona umzila ovame ukukhethwa yizivakashi ukuvakashela izindawo zokuvakasha ezizithandayo.
Yiqiniso, iKolyvan Lake idumile hhayi kuphela ngobuhle bayo obungenakulinganiswa. Iphuzu futhi ukuthi amabhange alo ahlelwe ngamatshe ngendlela yezibalo ezihlukahlukene. Ngenxa yokucabangela komuntu, ezinye zifana nezinsika ezinkulu, izindlovukazi ezinkulu, izilwane ezinkulu, ngisho nezindlela zabantu. Ososayensi bachaza imfundo yabo ngenxa yokuhamba kwamagagasi olwandle lasendulo, okwakutholakala eNtshonalanga yeSiberia yaseNtshonalanga, futhi nangenqubo yemvelo yezulu. Lesi simo sihlukile kwi-Altai Territory. Ichibi ngokwayo livame ukubizwa ngokuthi i-blue gem, eqoshiwe emadwaleni angavamile.
Ehle, ezolile, futhi ebaluleke kakhulu - ehlanzekile ngokungajwayelekile futhi ezinsukwini zethu Kolyvan Lake. Ukubuyekeza ngobuhle nokuhlanzeka kwamanzi ayo kuningi futhi kuyiqiniso. Isiqinisekiso sikhona echibini lomkhonto wamanzi angavamile (i-chilima), ehlongozwe eNcwadini Ebomvu YaseRussia Federation futhi usekupheleni kokuqothulwa. Lesi sitshalo esinezitshalo, esiqala ukuba khona esikhathini sokuqala. E-altai chilim itholakala naseManzherok echibini namanye amachibi amancane. Le walnut iqukethe amaprotheni amaningi kanye nesitashi. Ngaphambilini, kwakungasetshenzisiwe kuphela ekudleni, kodwa futhi kwakuyisisekelo samathemistri kanye nezifiso. Kusukela emagobolondo we-chilima atholakala ngemikhumbuzo emihle. Ngokufanayo namademoni anezimpondo, azikho nje kuphela endaweni yamanzi, kodwa futhi nasogwini lwaseLolyvan Lake.
Yiqiniso, iziphathimandla zendawo zizama ukwenza izinto ezibonakalayo ekuthuthukiseni ukuvakasha okusebenzayo okuye kwasusa iLolyvan Lake. Izisekelo zokuzijabulisa ezisezindaweni ezizungezile, zama ukunikeza abavakashile ithuba lokududuzeka nokukhululeka.
Futhi ngisho nangenkathi ebandayo kukhona into okufanele uyenze, njengoba ungase ube nesikhathi esihle esiteshini sezindiza "Zmeinogorsky", esinezintambo ezintathu ze-ski ezigijima nge-ski lift.
Umthwalo wokuhlela ukuhamba emfuleni waseGornaya Kolyvani uhlala emnyuziyamu womlando wokuthuthukiswa kwezimayini. A. Demidov edolobheni laseZmeinogorsk, okuyinto eyona engcono kakhulu e-Altai.
Namuhla lolu daba lukhuthaza kakhulu ukuthuthukiswa kwezokuvakasha zasendle. Kunezindawo ezinhle neziningi ezithandwayo zeholide lomndeni othulile noma abathandi bokudoba. Nokho, kunzima ukufika ezindaweni ezinjalo ezinhle kakhulu. Kulezi zimo, kufanelekile ukuhamba ngezinyawo, noma izimoto ezinamandla ezingekho emgwaqweni.
Emkhakheni weNtaba yaseKolyvan nazo zonke iziqhingi zokuvakasha, ezihambisana ngokuphelele nalabo abavakashela Kolyvan Lake - Sunny Beach, Golden Fish, Edelweiss, Azure, Pearl. Bonke bazama ukuhlinzeka ama-holidaymakers ngezinsiza ezidingekayo, ukuzijabulisa, kanye nenhlalakahle.
Ngakho, ihostele "Sunny Beach" inezindlu ezingu-13, ezenzelwe ukuhlala nabantu abangamashumi amahlanu, kanye nama-saunas amabili. Ngaphezu kwalokho, ogwini lolwandle luhlinzekwa ukuqashwa kwe-ATV, ukuvakasha okuthakazelisayo kuhlelwe, kukhona ama-aquazorbas ne-tarzanka.
Endaweni yesimiso sokuthi "iLazurny" kunezindlu ezingu-16, ezihlala ezivakatheni ezingafika ku-70. Lapha kukhona i-sauna, i-cafe yokudla okusheshayo, kanye nemisebenzi yezempilo kulabo abavakashelayo, njenge-massage ne-phyto bar.
Ukubuyekezwa kokunye echibini
Iningi labantu abavakashela iLolyvan Lake, likhulume ngakho ngokuziqhenya kwangempela. Izinzuzo zayo eziyinhloko ziyizinhlobonhlobo ezinhle kakhulu nezinqwaba ezinamahloni.
Ichibi ngokwayo liyindawo enhle kakhulu. Amabhishi alo ahlanganiswe nesihlabathi esikhulu kakhulu, futhi ngokuqhubekayo kusukela ogwini phansi kuyaba nodaka. Amanzi ahlanzekile kakhulu futhi afudumele.
Ichibi lilungele abathandi bokudoba. Iqukethe i-carp, i-pike, umugqa, i-perch, i-roach ne-ruff.
Ukungaphumeleli okuphawulwe ngabaholi bamaholide kufaka phakathi indawo engeyona eduze kwezitolo kanye nokukhethwa okuncane kwemikhiqizo kuzo. Nokho, konke lokhu kuya ngemuva uma kuqhathaniswa nobuhle obungalindelekile, obuyingqayizivele bukaKolyvan Lake.
I-Kenozersky National Park: umlando, izithombe, ukubuyekezwa
Ubuhlungu emva kocansi